site ha na 21-05-23
Companylọ ọrụ anyị sonyere na 2018 CACLP EXPO na ngwa ọhụrụ ndị mepụtara onwe ha. The 15th China (International) Laboratory Medicine na Blood Transfusion Instrument and Reagent Exposition (CACLP) emere na Chongqing International Expo Center site na Machị 15 rue 20, 2018. ...
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. ihe nyocha ọhụụ nke corona ọhụrụ enwetarala asambodo CE, na-enye aka na mgbochi na njikwa ọrịa zuru ụwa ọnụ.
Ka ọ dị ugbu a, ọrịa zuru oke ọria corona zuru ụwa ọnụ na-amalite ngwa ngwa na ọnọdụ ọjọọ. N'ime izu abụọ gara aga, ọnụọgụ nke mmadụ iri na itoolu na-esote mpụga China abawanyela okpukpu iri na atọ, ọnụ ọgụgụ mba ndị emetụtara okpukpu atọ. WHO kwenyere na ...
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. ji obi eziokwu na-akpọ gị òkù isonye na China Expo Expo Expo (mgbụsị akwụkwọ, 2019)
China Higher Education Expo (HEEC) enweela ihe ịga nke ọma maka oge 52. Kwa afọ, a na-ekewa ya na nnọkọ abụọ: mmiri na ụbịa. Ọ na-agagharị mpaghara niile nke China iji mee ka mmepe mmepe nke mpaghara niile. Ugbu a, HEEC bụ naanị onye nwere ọkwa kachasị ukwuu, ...
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. mepụtara ihe nyocha ọhụụ ọhụrụ nke Coronavirus
01 Ọganihu kacha ọhụrụ nke ọnọdụ ntiwapụ nke ọrịa Na Disemba 2019, usoro nke ọrịa oyi baa na-akọwaghị na Wuhan. Ihe omume a metụtara ndị niile metụtara ndụ. Ihe izizi ahụ bụ ihe izizi bụ nje New Corona ma kpọọ ya “2019 New Corona virus (2019-nCoV) & ...
Nnukwu nsonye Bigfish na mmemme njikọ ọrịa ọrịa mba zuru oke rụzuru ọrụ ahụ wee laghachi na mmeri
Mgbe otu ọnwa na ọkara nke ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ gasịrị, n'ehihie na July 9 oge Beijing, ndị otu mba na-egbochi ọrịa na-efe efe na-emekọ ihe ọnụ nke azụ azụ kesara nke ọma rụzuru ọrụ ya wee rute na Tianjin Binhai International Airport n'udo. Mgbe ụbọchị iri na anọ nkewapụrụ iche, nọchiri anya ...
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. na nkwonkwo omume na-alụ ọgụ ọhụrụ akwụkwọ corona virus ka oyi baa na Morocco
Novel corona virus na-efe efe malitere na May 26th site na ndị otu jikọrọ ọnụ nke mba ụwa iji zipu nkwado ọrụ aka na Morocco iji nyere Morocco aka ịlụ ọgụ megide okpuru okpueze ọhụrụ. Dịka onye otu covid-19 mba jikọrọ aka megide ọrịa, Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. pa ...
Analystica China 2020 na-abịa na njedebe
The 10th gbasara nyocha China 2020 na Munich emechaala nke ọma mechie na Shanghai New International Expo Center na November 18, 2020. E jiri ya tụnyere 2018, afọ a kachasị iche. Ọnọdụ ntiwapụ nke mba ofesi dị njọ, ma enwere ntiwapụ oge ụfọdụ na ...
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. na-aga 9th Liman China Pig Raising Conference
"Na Xuan anya na ụbịa mmiri ozuzo, ajụkwa n'ime okpomọkụ uwe Qing.". Na udu mmiri oge mgbụsị akwụkwọ, 9th Liman China Pig Raising Conference na 2020 World Pig Industry Expo mechiri nke ọma na Chongqing na October 16! Ọ bụ ezie na af ...
Ekele dịrị Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. maka mmeri Asambodo Mba
Mmepe nke sayensị ndụ na-agbanwe ngwa ngwa. Echiche ọha na eze nke nchọpụta nucleic acid na mkpụrụ ndụ ihe omimi bụ ihe ndị mmadụ niile maara site na ntiwapụ nke ọrịa oyi na-akpata New Corona. Nchọpụta Nucleic acid arụkwala ọrụ dị mkpa na mgbochi na njikwa nke epide ...
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. na-enyere gị aka idozi ahụ ọkụ swine nke Africa (ASF)
Ọganihu metụtara ya Dịka Officelọ Ọrụ Ozi nke Ozi nke Ugbo na ime obodo, na August 2018, ọrịa ezì nke Africa mere na Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province, nke bụ ihe otiti mbụ nke Africa na China. Dị ka nke Januar ...
CACLP 2021 okooko osisi na-ekpo ọkụ na-abịakwute gị
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. na-aga CACLP 2021 Na Machị 28-30, 2021, 18th China International Laboratory Medicine and Blood Transfusion Instruments and Reagents Expo & the first China International IVD Upstream Raw Materials and Manufacturing Supply Chain Expo ẹkenịmde na Chongqi ...
CACLP 2020 Otu ọkụ nwere ike ịmalite ọkụ ọkụ
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd nwere ihe ịga nke ọma sonyere na caclp2020 nke COVID-19 na-emetụta, ngosi ngosi CACLP agafeela usoro ntụgharị na ntụgharị. Ka ọnwa nke asatọ dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na anọ ruo n’abalị iri abụọ na otu, n’afọ 2020, anyị webatara 17th Medical Laboratory International and Blood Transfu.